Ny Corona Reef Watch Program an'ny NOAA dia mampiasa fampahalalana amin'ny zanabolana sy fitaovana enti-miasa hanehoana ny fiakaran'ny maripanan'ny ranomasina. Sary natolotr'i NOAA
Coral bleaching events dia mety hiteraka fahasimbana ara-tontolo iainana mafy sy miely amin'ny vokatra goavana ho an'ny vondrom-piarahamonina sy indostria mifototra amin'ny haran-dranomasina. While the ny antony mahatonga ny vato hodi-kazo tsy mihoatra ny fitarihana mivantana amin'ny fitantanana eo an-toerana, ireo mpitantana ny haran-dranomasina dia manana andraikitra manan-danja hilalao mialoha, mandritra sy aorian'ny fisehoan-javatra marefo.
Ny mpitantana dia mety manana andraikitra samihafa mifandraika amin'ny fisehoan-javatra marefo:
Famaritana sy fampitana loza
ny fahatakarana ny fiantraikany amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina
fanatanterahana ny valin'ny fitantanana mba hampihenana ny fahasimban'ny fahasimbana sy / na ny fanampiana amin'ny fanarenana vatohara
Mety hitranga tampoka ny zava-mitranga, ary tsy dia misy fotoana firy hanomanana sy hametrahana valiny. Ny drafitry ny fanolanana an-kilabao dia fitaovana manan-danja ahazoana antoka fa ny manamboninahitra mpanamboatra dia efa vonona ary afaka mamaly araka ny tokony ho izy amin'ny hetsika momba ny harena mangatsiaka. Ny drafitry ny valin-doha fanakona dia mamaritra ny dingana arahina amin'ny fisehoan-javatra, fanombanana, ary fandraisana andraikitra amin'ny fivalozana. Izany dia ahafahan'ireo manampahefana ho vonona raha misy tranga marevaka. Izany dia mety ho zava-dehibe amin'ny fomba hizarana ny zava-niseho amin'ny haino aman-jery, noho ny fiantohana ny fitokisana amin'ny mpiray antoka, ary ny fiomanana amin'ny hetsika fitantanana mety. Ny drafitry ny kitapo mivalo amin'ny ankapobeny dia matetika ahitana fifamatorana amin'ny asa mahazatra sy mahavariana; Ny andraikitry ny valinteny dia ampiharina rehefa tapitra ny sasantsasany na ny trigger.
Ny drafitry ny valin'ny fandokafana dia afaka miseho amin'ny endrika maro, manomboka amin'ny rafitra valinteny fitantanana feno (ohatra: Great Barrier Reef Marine Park Authority's Incidence Response System) ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso ny tranga sy ny fomba fanao an-tsaha mankany amin'ny famaritana pejy iray tsotra momba ny dingana lehibe sy ny banga. Ny singa efatra lehibe amin'ny drafitra valinteny fandefasana dia: 1) rafitra fampitandremana mialoha; 2) fanombanana ny fiatraikany; 3) fidirana an-tsehatra amin'ny fitantanana; ary 4) serasera.
Ity latabatra ity dia manome ohatra amin'ny karazan'asa azo ampiharina eo ambanin'ny singa tsirairay ho an'ny sehatr'asa telo samihafa (ambany, ambany, ary avo lenta).
Famolavolana drafitra fanakanana Bleaching
Ny fandaharam-pikarakarana mialohan'ny hetsika marevaka dia ahafahan'ny mpitantana mamaly haingana rehefa mitranga ny fijanonana. Tena zava-dehibe ny handroso mialoha ny asa, ny famatsiam-bola, ny fifandraisana ary ny fanaraha-maso. Ny fananana drafitra eo amin'ny toerany dia hanampy ny mpitantana hahazo ny fahamendrehana sy ny fanohanana ara-politika amin'ny mpampiasa reefatra sy ny mpanapa-kevitra. Rehefa mampivelatra ny drafitra fanolorana ny banga dia zava-dehibe ny mampiditra ireo mpandray anjara manan-danja sy ireo mpiara-miasa, ary koa ireo mpiandraikitra ambony ao anatin'ny fikambanana. Ny famaritana mazava tsara ny andraikitra sy ny andraikitr'ireo fikambanana sy olona rehetra mandray anjara amin'ny valinteny dia manan-danja amin'ny fahombiazan'ny drafitra iray. Misy mpitarika sy fitaovana tsara (jereo ny Resources, etsy ambany) mba hanampy amin'ny fanomanana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny hain-trano manga. Nanangana koa izahay misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanampiana Hisaintsainamanokatra fisie PDF mba hitari-dalana ny mpitantana amin'ny alàlan'ny famolavolana drafitra an-dalambe. Ity fitaovana ity dia afaka manampy ireo mpitantana handinika olana maro izay manohana ny valinteny, anisan'izany:
Famaritana hetsika fanangonam-bolo
Fametrahana fivoahana ho an'ny fandraisana andraikitra
Ny fanombanana ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy sosialy ara-ekonomika amin'ny fijanonana manga
Fanaraha-maso ny mialoha sy ny fijanonana ho an'ny maso mba hahafantarana ireo faritra voajanahary marefo
Miresaha momba ny mangana mialoha, mandritra sy aorian'ny hetsika
Ny fanatanterahana ny fanaraha-maso eo amin'ny fitantanana izay mety hampitombo ny fiveloman'ny vatohara mandritra ny fisehoan-javatra
Miantoka ny famatsiam-bola ho valiny
Famantarana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ilaina ho an'ny valinteny
Indray mandeha ny haran-dranomasina iray dia nisy fiantraikany tamin'ny fitrandrahana haran-dranomasina, mety maniry ny handinika ireo mpitantana fanaraha-maso ny fitantanana eo an-toerana or tetik'ady famerenana amin'ny laoniny mba hanohanana ireo fitsaboana fanarenana. Na izany aza, ny hetsika fanangonam-bozaka dia matetika dia mipoitra amin'ny haben'ny ampahatelon'ny kilometatra an-jatony kilometatra, mamerina ny laoniny ho lafo sy sarotra - raha tsy vita izany - ny fahatsinjovana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKitapo lehibe ho an'ny Corollage ho an'ny Coral Bleaching 2010-2011manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra fifandonana haingana momba ny valinteny haingana any Hawaiimanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetik'asa iraisam-pirenena ho an'ny fanombanana sy ny fanaraha-maso ny fanalan'ny Coral
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasan'ny planeta fanolanana TNCmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Great Barrier Reef Marine Park Authority Reef Health Inside Response System